Wiil yar oo gargaar bini'aadaminimo u baahan.... Akhri...
Wararkii: Sept 21, 2007
Cabdiqani Shancad oo isu Taagay Jagada Madaxweynenimada ee Puntland....
Binti Jaylaani iyo Aabbaheed oo dalka Mareykanka u ambabxay
Qorshihii Dowladda Federaalka u tagay Sucuudiga oo…
Cali Mahdi oo si kulul uga jawaabay hadalkii Qanyare..
Warsaxaafadeed uu soo saaray shalay Mudane Abdiqani Shancad Maxamed Warsame (Shancad) ayaa ku sheegaya inuu isu taagay ama isu sharaxay Jagada Madaxweynenimada Maamul Goboleedka Puntland.
Mudane Abdiqani Maxamed Warsame (Shancad) ayaa degan Gobolka Minnesota cariga mareeykanka.
Gobolka Minnesota ayaa ah gobolada ay ugu badan yihiin dadka qurbaawiga ah ee asalkoodu ka soo jeedo Gobolka Puntland.
Abdiqani Shancad waa siyaasi degan gobolka Minnesota kuna jiray siyaasada in mudo ah waxaad ka aqrisataan Halkan Warsaxaafadeedkiisa oo dhan.
Waxaa soo tebiyey: abdikarim@journalist.com
Binti Jaylaani Max’ed oo ah Gabar Soomaaliyeed oo afka Buro uga soo baxday mudana ku xanuunsaneysay Magaalada Muqdisho ayaa shalay u ambabaxday iyada iyo Aabbaheed dalka Mareykanka.
Binti oo ay ka muuqato farxad ayaa mar aan kula kulanay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, waxay noo sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in lagu soo daaweeyo dalka Mareykanka, waxayna u mahacelisay intii gacanta ka gaystay in lagu soo daweeyo dalka Mareykanka.
Gabadha iyo Aabbaheed waxaa hofey u sii raacay Cayni Abuukar Gacal oo ka socotay Hay’adda COGWO, waxayna gaarsiineysaa magaalada Nayroobi si ay ugu fududeyso arrimaha safarka Binti iyo Aabbaheed, mar aan la kulanayna waxay noo sheegtayin Ha’addoodu ay ka mid ahayd hay’adihii fududeeyey bixitaanka binti iyo Aabbaheed.
Sidoo kale Web-Site-ka Somalitalk ayaa ahaa kii ugu horeeyey ee soo bandhiga dhibaatada gabadhaasi, iyadoo uu u gudbiyey Amiin Yuusuf Khasaaro, sidoo kale waxaana waxaan iyana qayb ka qaatay Dowladda Federaalka oo fududeysay safarka Nayroobi iyo Muqdisho, waxaa kaloo iyana Tikitka diyaaradda gabadhaasi ilaa iyo Nayroobi bixiyey shirkaadda Tabuuk oo fadhigeedu yahay dalka Imaaraadka Carabta.
Soomaali fara badan ayaa ku sugeysa dalka Mareykanka oo iyagu u diyaariyey Isbitaalka lagu qalayo gabdhaasi iyo waliba dhaqaalaha ku baxay caafimaadka Binti Jaylaani Max’ed.
Mar aan wareysanay Aabbaheed waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in gabadhiisa lagu soo daweeyo dalka Mareykanka, waxa uuna u mahadceliyey intii gacanta ka gaystay in gabadhiisa loo qaado dlaka Mareykanka.
Waxaa maalintii shalay ahayd Magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay wafdigii uu hogaaminayey Madaxweynaha Dowladda Federaalk iyo qaar ka mid ah ergooyinkii ka qaybgalay shirkii Muqdisho raacayna wafdigii Madaxweynaha, hase yeeshee mid ka mid ah ergooyinkii ku jiray wafdiga oo diiday in magaciisa la sheego ayaa sheegay in markii hore halkaasi loo tagay in Dowladda Sucuudiga laga soo helo dhaqaale, hase yeeshee Dowladda Sucuudiga waxay ku xirtay in shirka dib u heshiisiinta la baalaariyo lagana soo qaybgeliy dhamaan kooxaha ka soo horjeeda Dowladda Federaalka.
Waxaa kale oo uu sheegay in Dowladda Sucuudiga ay ka go’an tahay in dadka soomaaliyeed ay heshiis dhab ah gaaraan, waxaa kale oo uu sheegay in Dowladda Sucuudiga ay ballanqaaday in ay bixi doonto qarash kasta oo ku baxaya shirkaasi la isugu keenayo dhamaan kooxaha Soomaaliyeed iyo Dowladda Federaalka.
Dhinaca Dowladda Sucuudiga waxay iyana u yeeri doontaa oo ay martiqaad u sameyn doontaa kooxihii kale ee iyana shirku ugu dhamaaday dalka Ereteriya, oo iyagana ay ka dhageysan doonto mawqifkooda ku aadan xal u helida Arrimaha Soomaaliya, waxaana la filayaa in ergay ka socda Dowladda Sucuudiga oo soo gaaro gudaha dalka Soomaaliya, isla markaana waxa uu booqashin ku soo kala bixin doonaa maamulada Somaliland, Puntland iyo Magaalada Muqdisho, isagoo kulamo la yeelan doona mas’uuliyiinta goobahaasi. Qaar ka mid ah ergooyinkii ka qaybgalay shirka ayaa xubnaha ugu sarreeya Dowladda waxay ku eedeeyeen in ay mas’uul ka ahaayeen ergooyinkii lagu reebay Magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Diyaaradaha, iyagoo sheegay in arrintaasi ay tahay mid sii kala fogeyneysa Bulshada Soomaaliyeed, hase yeeshee afhayeenkii shirka dib u heshiisiinta C/raxmaan Shifti ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona laheyn.
Cali Mahdi Max’ed oo ah Guddoomiyaha guddigii dib u heshiisiinta shirkii beelaha Soomaaliyeed ayaa si kulul uga jawaabay hadalkii ka soo yeeray Xildhibaan Max’ed Qanyare AFrax ee ahaa in guddigaasi ay lunsadeen ilaa iyo lacag gaareysa 8-Milyan oo Doolar oo loogu talagalay in lagu socodsiiyo shirkaasi, waxa uuna Cali Mahdi ku tilmaamay hadalkaasi mid aan waxba ka jirin, isagoo sheegay in Qanyare looga baahan yahay in uu keeno caddeeyo la xiriira warkaasi.
“Guddiga dib u heshiisiinta lacagahaasi ma maamulin, ee waxaa maamulay mas’uuliyiin ka socotay hay’adihii loo xil saaray lacagtaasi” ayuu yiri Cali Mahdi Max’ed oo sheegay in shirkii dib u heshiisinta ku dhamaaday guul ayna ka soo baxeen go’aano waxtar u leh, waxa uuna sheegay in Dowladda Federaalka iyo ergooyinkii ka qaybgalay shirkaasi ay heshiiskaas ku dhameystireen boqortooyada Sucuudi Carabiya.
Maalintii saddexaad oo ay hawada ka maqan Idaacadda Shabeele
Maalintii saddexaad ayey Idaacadda Shabeele u gashay ka maqnaasha Hawada kadib markii ay weerar ku soo qaadeen Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka oo waxyeelo gaarsiisay dhismaha Idaacadda.
Jacfar Kuukaay oo ah kusimaha Agaasimaha Idaacadda ayaa waxa uu sheegay in Idaacadda u damiyeen kadib markii ay hanjabaadyo uga yimaadeen dhinaca Dowladda, hase yeeshee Sarkaal u hadlay Dowladda Federaalka ayaa waxa uu sheegay in aysan wax war ah u haynin hanjabaadaasi, sidoo kale Dowladda Federaalka waxay iska fogeysay in ay Albaabada u laabtay Idaacaddaasi.
Mas’uuliyiinta Idaacadda ayaa waxa ay sheegeen in Idaacadda aysan furi doonin tan iyo inta meel laga saarayo hanjbaadyada idaacadda loo gaystay iyo waliba in ay Idaacaddu hesho jawi nabadgelyo oo buuxa.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 21, 2007
Mas’uul ka tirsan Qaramada Midoobey oo dib looga celiyay Magaalada Baydhabo
.Isbahaysiga Asmara oo la sheegayo in uu xal ka gaaray..
.Gacma Dheere oo ka codsaday Hay’adaha samafalka inay..
.Qaraxyo iyo Weeraro shalay ka dhacay suuqa Bakaaraha..
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Sept 19